Ra’iisal Wasaare Rooble oo Danjiraha Turkiga kala hadlay xoojinta taageerrada ay siiyaan Soomaaliya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ra’iisal Wasaare Rooble oo Danjiraha Turkiga kala hadlay xoojinta taageerrada ay siiyaan Soomaaliya
Ra’iisal Wasaare Rooble oo Danjiraha Turkiga kala hadlay xoojinta taageerrada ay siiyaan Soomaaliya
written by Admin 30/10/2020
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xusseen Rooble oo xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Danjire Mehmet Yilmaz ayaa adkeeyey xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeya labada dal.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in shacabka Soomaaliyeed aysan marna ilaawi doonin abaalka Turkiga, ugana mahad-celinayaan taageerada iyo waxqabadka muuqda ee suurageliyey in waddankeena uu tallaabo horey u qaado, isagoo xusay in Xukuumaddiisu ay sii adkeyn doonto xiriirka walaaltinimo ee labada dal ka dhexeeya.
Rooble ayaa sheegay in xiligan muhiimka ah ay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo u baahan in laga caawiyo arrimaha banii’aadamnimada, isagoo uga mahadceliyey taageerada dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo Gargaarka.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo Danjiraha Turkiga kala hadlay xoojinta taageerrada ay siiyaan Soomaaliya was last modified: October 30th, 2020 by Admin
Xukuumadda oo sheegtay in laga bilaabo bisha soo socta gud-gali doonaan howlaha doorashooyinka
Dhul-gariir khasaaro gaystay oo ku dhuftay Turkey iyo Greece.
Dhageyso: sanad guuradii idaacada warsan ee magaalada baydhabo waxaana soo dhaweymaamulka gobolka hiiraaan;
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u safray magaalada Dhuusomareeb
AKHRISO:-QM oo sheegtay in ay kordheen Weerarada Al-Shabaab
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa war-saxaafadeed goordhow ka soo saartay heshiiskii Dhuusamareeb
Madaxweyne Deni “Waxaa meesha ka baxay Khilaafkii ka dhex-jiray DF iyo Mamul Goboleedyada”